Gbasara Anyị - Baoding Lekai International Ltd.
Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na anọ n’afọ 1953, nzukọ gọọmentị nke 199 nke State Council mere “Mkpebi na mwepụta nke ntaneti ihe nkiri na ụlọ ọrụ ihe nkiri” wee kpebie iwu ụlọ ọrụ ihe nkiri na China.
Na July 1, 1958, e mere atụmatụ ịgbapụta ala na Baoding obodo, Mpaghara Hebei. Aha ụlọ ọrụ izizi, Baoding Filmstrip Factory, nyeere ya aka.
Na July 1, ulo oru ihe omuma 101 ka emeputara ma meputa ihe izizi nke ihe oji na oji na ihe nlere na China, nke emeputara mita 427,000 n’aho ahu. Emepụtara ihe nkiri eserese na-aga n'ihu na August na ihe nkiri 135 na Ọktọba.
Na 1969, ihe oji na nke oji na nke oji, nke oji na nke ogha-agba ocha, na nke emeghere ihe nkiri bidoro ebupụ.
N'afọ 1972, ihe nkiri ojii na ọcha na-acha ọcha na nke oji na-agba oji (HD-5) malitere ịbupụ.
N’afọ 1974, ebidoro buputa ihe nkiri nke ojii na nke ọcha na ihe nkiri ikuku.
N'afọ 1977, a malitere ibupụ teepu ihe nkiri na agba ihe nkiri agba dị mma.
Na 1981, ebido ebuputara ihe mgbaze agba agba nke ọma.
Na 1985, ebido ebuputa fim ndị na-adịghị mma.
N’afọ 1986, ebidoro ibuputa ihe nkiri ojii na nke ojii dị otu narị, iri abụọ na otu na narị atọ.
N’afọ 1993, ndị gọọmentị gọọmentị nyere ikike mbubata na mbupụ njikwa ikike nke China Lucky, yana Ngalaba Mbubata na Mbupụ Mbupụ.
Na Jenụwarị 22, 1998, edere ihe nkiri Lucky na Shanghai Stock Exchange. Lucky Film Co., Ltd, ndị enyemaka nke China Lucky Film Corporation amalitela.
Eprel 1, 2011, Baoding Lekai International Ltd. guzobere mgbe mgbanwe nke China Lucky Film Corporation Bubata na Mbupụ Alaka Companylọ Ọrụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere obere ọrụ nke nwere ikike ibubata na mbupụ ikike na ikike onwe onye iwu nke China Lucky Film Corporation nwere.
Ruo ugbu a, ndị na-ekesa ndị si mba ofesi dị na Asia, America, Europe, Africa, ma nwee ngalaba na South Asia, Africa na Middle East, South America na mpaghara ndị ọzọ dị mkpa. A na-erere ngwaahịa ngwaahịa, ngwaahịa ahụike, ngwaahịa ike ọhụrụ, na ihe nkiri ihe nkiri pụrụ iche karịa mba 80 na mpaghara ụwa. N'ihe banyere azụmahịa nke mbubata, anyị na-enwe ezigbo kọntaktị azụmahịa na ihe karịrị ndị na-eweta 20 karịa mba 10.
Anyị na-atụ anya ịkwado gị.